IBHODI KUNYE NEBATTEN WOTINGCOTING (ISIKHOKELO SOYILO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi IBhodi kunye neBatten Wotingcoting (Isikhokelo soYilo)
Nayi ibhodi yethu kunye nesikhokelo sokuyilwa kwesoyile kubandakanya nokuba yintoni na, iintlobo zeenkuni zokusebenzisa, ukuba zinde kangakanani kwaye zinokuhombisa kunye nemibono yokuhombisa eludongeni. Ibhodi kunye ne-batten luhlobo lwe-wainscoting efakwe ngokuthe nkqo. Iqale njengokhetho olusebenzayo lwangaphandle. Abantu baseMelika benkulungwane ye-18 bafumanisa ukuba ukuba iibhodi zifakelwe ngokuthe nkqo, imvula yehla ingaphandle kwabo kunokuba ingene ekhaya. Ukuba bebegqume umthungo phakathi kweebhodi nenye, ibhodi encinci, akukho mvula ibinokungena kwaphela, kwaye i-siding ngoku yayixinene nomoya.
Isiqithi esimdaka sekhitshi
Kodwa ibhodi kunye ne-batten ingaphezulu kokusebenzisekayo, ikwayinto entle, ngenxa yoko ayizange ihlale ithintelwe ekusebenziseni kwangaphandle ixesha elide. Kungekudala, iindlela zebhodi kunye ne-batten zazisetyenziswa kwizivalo. Kungekudala emva koko, ibhodi kunye nepatten batten yangeniswa ngaphakathi endlwini, apho yayisetyenziselwa ukukhusela iindonga ekonakaleni.
Namhlanje, ibhodi kunye ne-batten isuswe ikakhulu kwimvelaphi ebonakalayo. Ibhodi yangaphandle kunye ne-batten isekhona, kodwa eyona nto isetyenziswayo kuyilo lwangaphakathi. Iindonga zonke okanye iisilingi zinokugqunywa ebhodini kunye ne-batten, okanye inokusetyenziswa njenge-wainscoting.
Ibhodi kunye ne-batten wainscoting ihlala isetyenziswa malunga nee-intshi ezingama-32 eludongeni, ukulinganisa ukusuka emhlabeni. Inendawo yokuhlala yasefama ekhululekile. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo, inokufakwa ngokulula ngumntu ongeyongcali onamava okuchwela.
Ukufunwa kwamanzi kunokuba yindlela engabizi kakhulu yokongeza ubukhulu kwigumbi kwaye ufezekise iinjongo zakho zoyilo. Umzekelo, unokukhetha ukufakwa kwi-wainscoting ethe tye ukuba unegumbi elincinci kwaye usukelo lwakho kukudala inkohliso yendawo engaphezulu.
Ukuba ufuna iprojekti elula ye-DIY eya kuthi yongeze umdla wokwakha ekhayeni lakho, unokuba ucinga ngebhodi kunye ne-batten wainscoting.
Yintoni iBhodi neBatten?
Ngaba iBhodi kunye neBatten Wotingcoting?
Loluphi uhlobo lweenkuni ezisetyenziselwa iBhodi kunye neBatten?
IBhodi kufuneka ukuba ibe nde kangakanani kunye nokuThathwa kweWatchings?
Zeziphi iiBhodi zokuSebenzisa oziSebenzisela iBhodi kunye neBatten?
Ukufumana amanqaku ngokuchasene neBhodi kunye neBatten
Uthini umahluko phakathi kweBhodi kunye neBatten kunye neBeadboard?
Apho usebenzisa iBhodi kunye neBatten Wotingcoting
IBhodi kunye neGumbi lokuTyela laseBatten
IBhodi kunye neBatten Kitchen
IBhodi kunye neBatten Bathroom
Iibhodi kunye neeHolo zeBatten kunye nokuNgena
IBhodi kunye neBatten Nursery
Ibhodi kunye ne-batten ligama elinikezelwe kwindawo yokuhombisa kwaye ngamanye amaxesha ikhusela iinkcukacha. Iqukethe iibhodi ezibanzi, ezijolise nkqo zibekwe ecaleni. Apho iibhodi zidibana khona, ibhodi encinci (ebizwa ngokuba yi-batten) isetyenziselwa ukugubungela umthungo.
Ngokwesiko, iibhodi zazenziwe ngomthi, kodwa namhlanje phantse nayiphi na into enokusetyenziswa kubandakanya i-vinyl, i-aluminium, isamente, okanye isinyithi.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, isicelo sokuqala sebhodi kunye ne-batten sasinjenge-siding yangaphandle. Iibhodi zibonelele ngobuninzi bokhuseleko kwizinto, ngelixa iibhett zithintela umoya kunye nokufuma ekungeneni kwimiphakathi yeebhodi. Xa isetyenziswa njengecala, isasebenza ngale ndlela.
Nangona kunjalo, njengoko kuhlala kusenzeka kuyilo, ibhodi kunye neepatten batten ziye zavela ukuze zisetyenziswe kolunye useto. Ibhodi yangaphakathi kunye ne-batten paneling iyathandwa kumakhaya elizwe elingamiselekanga.
Iibhodi kunye nezivalo ze-batten ziguqula uyilo kancinci, kunye ne-batten ibekwe idiagonally kwiibhodi ezininzi njengenxalenye yenkqubo yenkxaso ye-shutter.
Kuyaxhomekeka. Ukuvavanywa kwempazamo sisithintelo esikhuselayo esisetyenziswa kwisiqingatha esezantsi okanye kwisithathu esezantsi segumbi, ihlala ihleli kuzo zonke iindonga. Ibhodi kunye ne-batten kubhekisa kuyilo oluthile olunokusetyenziselwa ukwenza lo mqobo ukhuselayo.
Ke, xa ibhodi kunye nepatten batten isetyenzisiwe kwisahlulo esezantsi segumbi elingaphakathi, ichanekile ukubiza oko kuphononongwa.
Nangona kunjalo, ibhodi kunye ne-batten ayisoloko isetyenziswa ngale ndlela. Akusoloko kusetyenziswa ngaphakathi. Ibhodi kunye noyilo lwe-batten lunokusetyenziselwa ukungafakwanga izicelo zokucoca, ezinje ngecala langaphandle okanye iivali. Kule meko, ayizukubizwa ngokuba yi-wainscoting. Bona Okuninzi imibono yokuwola kweli phepha.
Ngelixa ibhodi kunye ne-batten yayenziwe ngomthi, namhlanje inokuthengwa kwizinto ezahlukeneyo.
Iinkuni ezaziwayo zebhodi yangaphandle kunye ne-batten siding zezi; umsedare, icyprus, redwood, iinkumbi, hemlock, kunye nom-oki omhlophe. Izinto ezingezizo iinkuni zokusetyenziswa kwangaphandle zibandakanya isamente yentsimbi, ivinyl, kunye nentsimbi.
Xa ibhodi kunye ne-batten paneling ifakwe ngaphakathi, ipayini okanye i-MDF zihlala zisetyenziswa. Iibhodi zeLattice kunye nemitya yokubhabha zizinto ezithandwayo zebhodi ye-DIY kunye neendonga ze-batten.
IBhodi kunye ne-batten wainscoting kufuneka ilingane ngokobude obupheleleyo kodonga. Ngokubanzi, ifakwe kwisiqingatha esisezantsi okanye kwisithathu esezantsi segumbi.
Eyona njongo yoqobo yokukhutshwa kwebhola yayikukukhusela udonga kumonakalo. Ihlala isetyenziswa kumagumbi okutyela ukukhusela udonga kwimingxunya kunye neentsimbi xa iindwendwe zityhala izitulo zazo.
Ngelixa isenokwenzela le njongo namhlanje, uninzi lwabanini makhaya bakhetha ukufaka ibhodi kunye nokubethelwa kwewotscotting ngeenjongo zokuhombisa. Akukho mithetho inzima kwaye ikhawulezayo, ke ukuba uyayithanda ibhodi yakho kunye nokubetha i-wainscoting yokugubungela ⅔ okanye nokuba ¾ yodonga lwakho, yiya kanye phambili. Asinakucebisa ngokuya ezantsi ⅓ kobude bedonga lilonke.
Ukuba ujonge umlinganiso ngqo, zama i-intshi ezingama-32. Ukuphakama komndilili wokuphakama ziinyawo ezisibhozo. I-intshi ye-32 ye-wainscoting iya kugubungela ezantsi kwesithathu sodonga. I-intshi ezingama-32 ikwangumphakamo ophakathi wezinye izinto zokwenza i-wainscoting, ezinjengeepaneli zebadibhodi.
Ngokubanzi, iibhodi ezisebhodini kunye ne-batten siding okanye i-paneling lunyawo olunye ububanzi. I-batten eyiyo ayikho ngaphezu kweesentimitha ezimbini ububanzi. Nangona kunjalo, unokuziva ukhululekile ukuba wenze ngokwezifiso ubungakanani beebhodi zakho kunye neebhetts ukuze zilungele umbono wakho.
Ukubuyela umva kwebhodi kunye ne-batten yile nto ivakalayo ngathi-endaweni yeebhendi ezincinci ezigqume iiplanga zeebhodi ezibanzi, ii-battens zifakwe kuqala, kunye nezithuba phakathi kwazo zigutyungelwe ziibhodi ezibanzi.
Iimbono zesikhumbuzo seminyaka yokuqala kwizibini ezitshatileyo
Ukusuka kumbono woyilo kunye nowembali, ukuvavanywa kwe-wainscoting yinto ebambekayo, yokubamba yonke into kuyo nayiphi na into esetyenziswe eludongeni lwangaphakathi ngenjongo yokuyikhusela kumonakalo. Kwisigama sokuhombisa ngaphakathi, ibhekisa ngokukodwa kwiinkcukacha zodonga zokuhombisa, zihlala zisetyenziswa kwisiqingatha esisezantsi okanye kwisithathu esisezantsi seendonga.
Olunye ukhetho kule nkcukacha yokuhombisa yibhodi kunye nepateni yesitayile. Imigca ethe nkqo yongeza ukuphakama kwigumbi, ngelixa utshintsho kubunzulu phakathi kweebhodi kunye neebatten luzisa umdla wokwakha. IBhodi kunye neepaneli zebatten zinokupeyintwa ngombala owahlukileyo kunalo lonke igumbi lokwenza Uyilo lodonga olusisigxina ukuzisa umlinganiswa othile kwisithuba.
Izinketho ezingekho ebhodini kunye neebhetten zokucoca ulwelo kubandakanya i-shiplap, iphakanyisiwe okanye iiphaneli ezicabaleleyo, ulwimi kunye nomjelo, okanye ibhodi yebhodi.
Ibhodi kunye ne-batten yinto enye yoyilo olusetyenziselwa ukuntywila. Ibhodi yebhodi yenye. Zombini zoyilo zisebenzisa imilinganiselo emithathu kunye nemigca ethe nkqo, ukuzoba iliso phezulu kunye nokudala inkohliso yendawo ephezulu.
Kwimeko yokuqala, iibhodi ezimxinwa ezibizwa ngokuba yi 'battens' zibekwa ngaphezulu kwezinye iibhodi ukwenza uyilo olunemilinganiselo emithathu. Kumzekelo wesibini wokucoca i-wainscoting, i-beadboard, into ye-3D ivela kwimigca ephakanyisiweyo (ubuhlalu) engaphambi kokugaya kwiibhodi ngaphambi kofakelo.
Iibhodi ezinamaso emva koko zifakwe ecaleni. Iiphaneli zeBeadboard zikwakhona kwaye zikhawulezisa ngokubonakalayo inkqubo yokufaka ngaphandle kokubingelela ngobuhle.
Ibhodi kunye ne-batten wainscoting iya kukhusela iindonga zakho, yongeze umdla obonakalayo kunye nobukhulu kwigumbi, kwaye yonyuse ukubonakala kwendawo ethe nkqo. Ukusetyenziswa akukhawulelwanga kwigumbi elithile lendlu, ngoko vumela ukucinga kwakho kusebenze.
Igumbi lokutyela yeyona ndawo yendabuko kunye necacileyo yebhodi kunye ne-batten wainscoting. Kwigumbi lokutyela elisesikweni elikhulu, izitulo zokucoca zihlala zigcinwa eludongeni.
Kumagumbi okutyela amancinci, asondelelene ngakumbi, iindwendwe zinokumakisha ngengozi eludongeni xa zityhala isitulo sazo ukuba singene okanye siphume kwizihlalo zaso. Ibhodi kunye ne-batten wainscoting yindlela enomtsalane kunye nenesitayile yokuthintela ukujongwa okungathandekiyo okanye ukufota kwiindonga zakho zokutyela.
Ikhitshi alifani nalo naliphi na elinye igumbi endlwini kuba uninzi lodonga lufihliwe kwimbonakalo. Iikhabhathi kunye nezixhobo zombane zongeza ubunzima obubonakalayo kwisiqingatha segumbi.
Ibhodi kunye ne-batten wainscoting inokusetyenziswa ekhitshini ukuba uneendawo ezibalulekileyo zodonga oluvulekileyo. Akucetyiswa ngokubanzi ukuba kusetyenziswe ibhodi kunye ne-batten wainscoting njenge-backsplash.
Ibhodi kunye ne-batten zihlala zifumaneka kuyilo lwegumbi lokuhlambela kwaye zibonelela ngobuhle bokuyila Xa usetyenziswa kumagumbi okuhlambela amancinci ngebhodi yepeyinti ekhaphukhaphu kunye nebatten inokunceda indawo yakho ibonakale inkulu kunokuba injalo.
Iibhodi zihlala zibekwa malunga nee-intshi ezili-12 ngokwahlukeneyo. Umphezulu weebhodi ngokubanzi ubekwa nokuba sisinye kwisithathu sendlela yokunyuka kodonga okanye isibini kwisithathu kunyuka udonga kuxhomekeke kukhetho. Bona Okuninzi izimvo zangasese Apha.
Izikhala ezimxinwa apho ungangxamela khona kwigumbi lengqiniba zihlala zixhamla kwibhodi kunye nokubethelwa kwebhola ngenxa yezizathu ezibini. Okokuqala, imigca ethe nkqo yenza indawo izive inde kwaye ingaphantsi kwe-claustrophobic.
Amagumbi okulala eParis
Okwesibini, i-battens iyakuthatha uxinzelelo lwemihla ngemihla yeendawo ezixineneyo, ezinje ngeedingi, amanqaku kunye neentsimbi, kushiya udonga lwakho lungonakaliswanga.
Amangenelo afakelwe ibhodi kunye ne-batten wainscoting anikezela ukonwaba nokungafanelekanga vibe. Ukuqhubeka nebhodi kunye noyilo lwe-batten kuzo zonke iipaseji zekhaya yindlela entle yokufezekisa ukubonakala kwelizwe, nokuba kuphakathi esixekweni.
Indawo yokugcina abantwana okanye igumbi lokudlala yindawo entle yokufaka ibhodi epheleleyo kunye nokubethelwa kwebhola. Kwiindawo ezininzi zekhaya, ungahamba ngokufaka nje i-battens kunye nokuvumela i-sheet-rock okanye udonga olomileyo ngaphantsi kokusebenza njengebhodi.
Apho kubandakanyeka abantwana abancinci, ukhuseleko ngakumbi yinto elungileyo. Xa ixesha lokudlala liba ruddy kwaye abantwana bakho benyuka ngokoqobo eludongeni, uya kuba nombulelo ngeempawu zokukhusela zebhodi kunye ne-batten wainscoting.
Uyilo olunxulumene noko jonga igalari yethu ye iintlobo zeendlela zebhodi esezantsi .
awona magama athandwayo okugqibela kuthi
Iialbham zomtshato zobungcali zabafoti
yintoni ubudala obuphakathi
yintoni nkosikazi. mfutshane